ဟိုဒင်းထဲက ဟိုဟာကို လွမ်းခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဟိုဒင်းထဲက ဟိုဟာကို လွမ်းခြင်း
ဟိုဒင်းထဲက ဟိုဟာကို လွမ်းခြင်း
Posted by သင့်အေးရိပ် on Jun 28, 2017 in Creative Writing, History, Literature/Books, My Dear Diary | 20 comments
ဒီမနက် ထုံးစံအတိုင်း အိပ်ယာထပြီး ထုံးစံအတိုင်း မျက်နှာသစ် သွားတိုက်တာတို့၊ ထုံးစံအတိုင်း ရေချိ ုးပြီး
ထုံးစံအတိုင်း အိမ်သာ တက်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အိမ်သာမှာ ထိုင်မိပေမဲ့
ဒီမနက်တော့ ထုံးစံမဟုတ်တာ တစ်ခု တွေးမိပါတယ်။
အိမ်သာတက်ရင်း တွေးတဲ့အတွေးဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ အနံ့အသက် ကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ကိစ္စ မရှိဘူးထင်ပါတယ်။ စာ ဆိုတော့ နှာခေါင်းပိတ်ပြီး ဖတ်စရာ မလို။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ဝ နှစ်လောက်ကဆိုရင်
တခြားသူတော့ ဘယ်လို အိမ်သာထဲ
ကျွန်တော်ကတော့. . .
အိမ်သာထဲ ဝင်ရင် ဖတ်လက်စ-စာအုပ်တစ်အုပ်အုပ်ကို ကိုင်ပြီး ဝင်ပါတယ်။
ဖတ်လက်စ မရှိရင်လည်း စာအုပ်ပုံထဲက ဖတ်ပြီးသားဖြစ်စေအုန်းတော့ တစ်အုပ် ဆွဲပြီး ဝင်တာပါပဲ။
အိမ်သာတက်ရင်းတောင် စာအုပ် ကိုင် ဖတ်တတ်တဲ့အကျင့်က ကပ်ပါနေတာ။
စာအုပ်ထဲ စိတ်ရောက်ရင်း အိမ်သာတက်ရတာမှ အိမ်သာတက်ခြင်းအမှု ပြည့်စုံတယ်လို့ ထင်မိတာပဲ။
တစ်ရက် ငှားခ ဘယ်လောက်/ဘယ်လောက်ဆိုပြီး ငှားလာတဲ့ စာအုပ်ကို
ရက်ကျော်ခ ပိုမပေးရအောင် တစ်ထိုင်တည်း အပြီးဖတ်ချင်တဲ့စိတ်လည်း
ဒီတော့ စာအုပ်ဆိုင်က ငှားလာတဲ့
စာအုပ်များ လက်ထဲ ရောက်လို့ကတော့ ချောင်တစ်ချောင်မှာ ကုပ်ကုပ်ကလေး ထိုင်ဖတ်မိတာများ ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့။ မိုးတွင်းဆို ပို ဖတ်လို့ကောင်း။
ဖတ်ရင်းနဲ့ အရှိန်များ တက်လာလို့
လက်က မချချင်လောက်အောင် ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ အိမ်သာတက်ချင်လာစေအုန်းတော့။ အိမ်သာထဲထိ စာအုပ်နဲ့မျက်လုံး မခွာရေးချ မခွာ။
အဲ့တုန်းက ကျွန်တော် အဖတ်များတာက စုံထောက်ဝတ္ထုတွေထဲမှာ
လွန်းထားထားတို့၊ နိုကိုဇူးဇင်တို့၊ ကလျာ(ဝိဇ္ဇာ/သိပ္ပံ)တို့။ စောပြည့်မာလာတို့လည်း မလွတ်စေရ။
အဲ့နောက်တော့ ဒဂုန်ရွှေမျှား ရွှေဥဒေါင်း၊ မင်းသိင်္ခ၊ မင်းမြတ်သူရ၊ တြိစက္က စတာတွေလည်း စွဲစွဲလမ်းလမ်း ငှားဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ သိုင်းဝတ္ထုတွေက အဆစ်ပါသေး။ နောက်ပိုင်းမှာတော့
အကြည်တော်တို့ တာရာမင်းဝေတို့။ အပျော်ဖတ်ဝတ္ထုတွေ အပြင် မောင်ထွန်းသူတို့ မောင်ပေါ်ထွန်းတို့ မြသန်းတင့်တို့ရဲ့ ဘာသာပြန်စာအုပ်ဖြစ်တွေ/ ဂျူးတို့ ဖေမြင့်တို့အထိ. . . အိမ်သာတက်ရင်း ဖတ်ခဲ့သေးတယ်။ မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ ရုပ်ပြတွေကိုလည်း ဘယ်လွတ်လိမ့်မလဲ။ ငယ်ငယ်က ကာတွန်းစာအုပ်တွေကို ကျောင်းလွယ်အိတ်ထဲ ခိုးထည့် သယ်ပြီး ဆရာမ မသိအောင် ခိုးဖတ်တာတောင် သတိရမိသေး။
နောက်ပိုင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စာအုပ်အငှားဆိုင်ခေတ်က ကုန်သွားသလိုဖြစ် ဖြစ်လာ။ စာအုပ်ကို စာကြည့်တိုက်မှာ ထိုင်ဖတ်တာတို့ ဆိုင်က ဝယ်ဖတ်ရတာတို့လို ခေတ်ဘက် ရောက်လာတော့ အိမ်သာထဲ စာအုပ် ယူသွားတဲ့ အကျင့်လေးလည်း တဖြည်းဖြည်း ပျောက်လာသလိုပဲ။
ပျောက်ဆို စာအုပ်ဖတ်ရမယ့်အချိန်က နည်းသွားတာလည်း ထည့်ပြောရမယ်။
ဖုန်းတွေ ပေါလာကတည်းက စတယ်ထင်ရဲ့။ အဲ . . .ဖုန်းတွေ မပေါခင် အင်တာနက်ဆိုင်တွေ စ ပေါလာကတည်းက စာအုပ်ကိုင် ဖတ်ချိန် နည်းသွားတာလို့လည်း ပြောလို့ရမယ်။
အခုဆို အိမ်သာတက်ရင်း စာအုပ် ဖတ်လေ့ရှိတဲ့အကျင့်ကလေးတောင်
အိမ်သာထဲထိ ဖုန်းကို ယူသွားပြီး
FB ဖွင့်ကြည့်တဲ့ အကျင့်က ပေါ်လာပြီ။
လိုင်းပိုကောင်းနေတတ်သေးတာရယ်၊ ဖုန်းကို ကိုယ်နဲ့မကွာ အမြဲ ကိုင်ထားတတ်တာရယ်ကြောင့် အိမ်သာထဲရောက်တော့လည်း အလိုအလျောက်ကြီး ဖုန်းကို ဖွင့် ကြည့်မိရော။
အိမ်သာထဲမှာ ဖုန်းကိုမှ ဖွင့်ကြည့်မနေရင်လည်း ဟိုဆရာတော်တစ်ပါး ဟောသလို လုပ်နေရမှာ။
ကိုယ့်မစင်ကို ကိုယ်ပြန်ကြည့်ပြီး ခန္ဓာ့သဘောတွေ/ အပုပ်ကောင် အရုပ်ဆောင်တဲ့ သဘောတွေကို ရှုမှတ် ပွားများနေရမှာလေ။
အဲ့လို လုပ်ဖို့ကျတော့လည်း လူငယ်သဘာဝ အပျင်းကထူ။ စိတ်ကမပါ။ ဆိုတော့. . . အိမ်သာတက်ရင်း ဘာမှ လုပ်စရာ မရှိရင် ပါလာတဲ့ ဖုန်းလေး ဖွင့်။ ဟိုကြည့် ဒီကြည့်ပေါ့။
ဖုန်းထဲ ထည့်ထားတဲ့ PDF ဖိုင်နဲ့
E-BOOK တွေကိုတောင် ဖွင့်ကြည့်ဖြစ်တာမျိုး အတော်ရှားတယ်။ e-books က စာအုပ်ကို ကိုင်ဖတ်ရတာလောက် feel မကောင်းတာကြောင့်လည်း ပါတာပေါ့။
(အခုနောက်ပိုင်း စာအုပ်တွေ ဖတ်ဖို့ထက် ကျွန်တော့်ကို ပိုပြီး ဆွဲဆောင်နိုင်နေတာကတော့ FaceBook နဲ့ နိုင်ငံခြား ရုပ်ရှင်ကားတွေပဲ။
ကမ႓ာ နှစ်ခြမ်း ကွဲသွားပြီး FB နဲ့
ဖြစ်သွားမယ် ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံခြား
ရုပ်ရှင်တွေ ရှိတဲ့ဘက်မှာပဲ နေပါ့မယ်။)
ဟိုရောက် ဒီရောက် ပြောလာလိုက်တာ။
အခု ထပ် ပြောချင်လာတာက. . .
ဟိုတလောက မအူပင်မြို့မှာ ရှိတဲ့
စာရေးဆရာမတစ်ယောက် အိမ်ကို သွားလည်တုန်းက အကြောင်းလေး
အဲ့ဆရာမ အိမ်မှာ အိမ်သာ ခဏ
လုပ်ထားတယ်။ အဲ့ကြိုးတန်းမှာ ဂျာနယ် သုံးလေးစောင်ကို ခေါက်ပြီး တင်ထားပေးတယ်။
ရအောင် တမင် ထား ထားတာပေါ့။
အဲ့ဒါလေး မြင်ခဲ့ရတာကို ပြန် အမှတ်ရမိတော့. . . စာအုပ်ကို လက်က မချချင်ပဲ အိမ်သာထဲထိ ယူသွားပြီး ဖတ်တဲ့
အကျင့်ကလေး အလိုလို ပျောက်သွားခဲ့တာကိုပါ ပြန်လွမ်းမိလာရော။
အိမ်သာထဲထိ စာအုပ် ယူသွားပြီး
ပြန်ပေါ်လာအောင်. . .
ဖုန်းအသုံးကို လျှော့ပြီး စာအုပ်ကို
လက်က ကိုင်ဖတ်တဲ့ အကျင့်ကလေးကို အချိန် ပိုပေးပြီး ပြန်မွေးမြူဦးမှ. . .လို့. . .
ဟိုးအရင် တစ်ကိုယ်ရေတကာယ ဘဝတုန်းက အိမ်သာထဲမှာ စာအုပ်စင်လေး ရိုက်ထားတယ်…
နောက်ပိုင်းတော့ တွဲလျက် ရေချိုးခန်းက ရေနွေးနဲ့ချိုးရင် ရေငွေ့ရိုက်လို့ မထားဖြစ်တော့ဘူး …
ငယ်ငယ်ကတော့ အိမ်နားမှာ မဆလခေတ် ပါတီယူနစ်ရုံး ၊ စာကြည့်တိုက်လည်းရှိတာမို့…
ရှေ့ဟောင်း ဂန္တဝင်စာပေတွေ အကုန်ငှါးဖတ်လို့ရတယ် (ကိုယ်တွေနဲ့ သိနေတာကိုး) …
၈၈၈၈ ဖြစ်တော့ အဲသည့်ရုံးကို ဝင်ဖျက်ပြီး စာအုပ်တွေ မီးတင်ရှို့ဖို့လုပ်တာ …
မနည်းတောင်းပန်ပြီး စာအုပ်ကောင်းတွေကို ပြန်ယူရတယ် ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေကတော့ အနိစ္စ …
ဟိုး ရှေးခေတ် ဒဂုန်ရွှေမျှား ကနေ မောင်စိန်ဝင်း ၊ နွမ်ဂျာသိုင်းတို့နောက်ပိုင်း …
ဂျူး မေငြိမ်းနဲ့ နီကိုရဲပဲ ဖတ်ဖြစ်တော့တာ … အဲ… သုမောင်တို့ မင်းလူတို့တော့ လက်မလွှတ် …
မင်းလူနဲ့ နီကိုရဲ စာအုပ်တွေလည်း ကျနော် အတော်များများ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။ ဒါမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ မင်းလူရဲ့စာအုပ်တွေကို ဖတ်ရမှာ ပျင်းလာတယ်။
နီကိုရဲကိုတော့ ပေါ့ပျက်ပျက်လို့ ခံစားရတယ်။
သစ္စာနီရဲ့ ဝတ္ထုတိုတွေ ဆောင်းပါးတွေနဲ့
တာရာမင်းဝေ ဝတ္ထုတိုတွေထဲမှာ တဝဲလည်လည် ဖြစ်သွားသေး။ နောက်ပိုင်းတော့ စာပေသဘောတရားဆောင်းပါးတွေဘက် လည်ထွက်သွားရော။
ကျနော်လည်း ကိုယ်ပိုင် အိမ်လေး ခြံလေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင် အိမ်သာလေး ရလာတဲ့နေ့
အိမ်သာထဲ စာအုပ်စင်လေး ထည့်ထားအုန်းမှပါ။
အိမ်သာတက်ရင်း ဖတ်ဖို့တော့ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးဆိုင်ရာ ဂျာနယ်တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေ ထားဖြစ်မယ် ဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တာပဲ။
တီဒုံ့ အိမ်သာမှာ စာအုပ် အမြဲရှိတယ်။ တချို့စာအုပ်တွေ အိမ်သာထဲကပဲ ပြီးအောင်ဖတ်သွားတာ။
ဟုတ်။ ကျနော်လည်း အိမ်သာထဲ ဖုန်း ယူသွားတာကို ပြင်ပြီး တတ်နိုင်သမျှ စာအုပ် ယူသွားအုန်းမှပါလေ
အရင်တုန်းက အိမ်သာဝင်ရင် စာအုပ် ယူသွားပြီး တမေ့တမော ထိုင်ဖတ် တတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့် အိမ်က လိပ်ခေါင်း ထွက်မှာတောင် စိတ်ပူရတဲ့ အထိ။
ပြန်ထွက်လာရင်လဲ အိမ်မှာက မြန်မာ အိမ်သာ (ဆောင့်ကြောင့် ထိုင် ရတဲ့ဟာ) ဆိုတော့ ခြေထောက်တွေ ကျင်ပြီး ဆက်ထိုင်နေလို့ မရတော့တဲ့ အချိန်မျိုးမှ ပြန်ထွက်တာကိုး။
အခုနောက်ပိုင်းတော့ အီးဘွတ်ခ် ဖတ်ရတာ ပို အဆင်ပြေနေတယ်။
အီးဘွတ်ခ်ရိဒ်ဒါ နဲ့ သို့မဟုတ် တက်ဘလက် နဲ့ ဖတ်ရတာ စာအုပ်ကိုင်ဖတ်ရသလို မဟုတ်ပေမယ့် နေရာကျုံ့ သွားတာရယ် စာအုပ်ကြီးတွေ နေရာတကာ ကိုင်မသွားရတော့တာရယ်
(စာအုပ် အထူ တွေ ကို အိပ်ရင်း ဖတ်လို့ မျက်နှာပေါ် ပြုတ်မကျတော့တာလဲပါတယ်)
နောက် စာအုပ်ဈေးတွေ ကြီးလာတာရယ်
(ဝယ်တော့ ဖတ်သေးတာပဲ၊ ကိုဆေးရိုး ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ် ဆို ဝယ်ပြီး ဒီသယ်လာတာ ၃ နှစ်တောင် ကျော်နေပြီလား မသိဘူး။ ခုထိ မဖတ်ရသေးဘူး။ ထူလွန်းလို့ း) )
အဲ့လို အကြောင်းတွေနဲ့ စာအုပ် ထက် အီးဘွတ်ခ် ကို ပို အားသန်လာတော့တာပဲ။
ခုနောက်ပိုင်းတော့ ရုပ်ရှင် ဖဘ စာအုပ် သုံးခု မျှ ထားတယ်။
ကျနော့်မလည်း ဝယ်ထားပြီး မဖတ်ဖြစ်သေးတဲ့ စာအုပ်တွေရော
လက်ဆောင်ရတာတွေရော. . .
စာကြွေးတွေ အတော် ပုံနေတယ်ဗျို့။
မဖတ်ရသေးတဲ့ စာအုပ်တွေကို အိမ်သာထဲ ထည့်ထားမှ ဖတ်ဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်။
လမ်းသွားရင်း စာဖတ် ဖို့တော့ ကြိုးစားနေတာပဲ။ း)
မြန်မာစာအုပ်တွေကို ပီဒီအက်ဖ် စကန်ဖတ်ထားတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ စာစီပြီး အွန်လိုင်းကနေ ရောင်းတာမျိုး ရှိရင် ကောင်းမယ်။
ဒါမဲ့ ခု အိမ်သာထဲ ဖုန်းယူသွားတာ မကောင်းဘူးဆိုလား ဘာလား ညစ်ပတ်တယ်ဆိုလား ဘာလားး မသန့်ရှင်းဘူးဆိုလား ဘာလားမို့ အဲ့ အကျင့်ကို ဖြတ်နေတယ်။
စာအုပ်တစ်အုပ် ဆွဲယူသွားဖို့. . .
ဒီထက် တဆက့်တက်ပြီး အိမ်သာထဲမှာ စာအုပ်စင် ထားဖို့ . . .
လုပ်ရအုန်းမယ့် ကိစ္စတွေ စာရင်းထဲ ထည့်ပြီလေ
ကျနော်ဖြင့် အိမ်သာတက်ရင် စာအုပ် ယူသွားတုန်းကလည်း ဆယ်မိနစ်လောက်တော့ ကြာတာပဲ။ ၅မိနစ်လောက်နဲ့တော့ ဘယ်တုန်းကမှ မရ။
မွန်လေးကတော့ အရင်ကလည်းစာအုပ်ယူပြီးအိမ်သာမတတ်တတ်သလို ခုလည်းအဲလိုပါပဲ..ဟုတ်တယ် အိမ်ကလူကြီးတွေစာအုပ်တွေဂျာနယ်တွေယူသွားတာတွေ ့ဖူးတယ်
ကျနော်တော့ စာအုပ်ထိုင်ဖတ်ရင်း တက်တာ
အမြဲလိုလိုပါပဲ။ အခုနောက်ပိုင်းမှ အဲ့အကျင့် ပျောက်သွားတာ မွန်လေးရေ
ငါတို့မောင်နှမတွေ စာအုပ် အသည်းအသန်ရှာနေပြီဆို အိမ်သာတက်တော့မယ်ဆိုတာ အိမ်က သိတယ်..
ဟိ. စာအုပ်ကို အခြေအနေ ၂ မျိုးမှာ ဖတ်တယ်.. ထမင်းစားတဲ့အချိန်ရယ်.. အိမ်သာတက်တဲ့အချိန်ရယ်..
အဲဒီ ၂ ချိန်ဆို အချိန်တွေပိုတယ် ခံစားရလု့ိ့…
ထမင်းစားချိန်ကမှာ အခွေကြည့် TV ကြည့်နဲ့ အချိန်ဖြုန်းလို့ရသေးတယ်..အိမ်သာတက်တာက တကယ်ကြီးကို အချိန်ပိုနေတာ.. နီပြောသလိုပဲ အရင်က စာအုပ်ဖတ်တယ်.. အခု ဖုန်းကြည့်တယ်.. ဒါပေမယ့်လည်း စာကို တကူးတကမဖတ်ဖြစ်တာကြာတော့ အနည်းဆုံးတော့ အိမ်သာတက်ရင်း ဖတ်ဖြစ်အောင် အကျင့်ပြန်လုပ်ပါဦးမယ်လေ..
အေးဆို။ အခုနောက်ပိုင်း စာအုပ် မကိုင်ဖြစ်တာများ. . . ထမင်းစားရင်းနဲ့ ဖုန်းထဲက ဒေါင်းထားတဲ့ ဇာတ်ကားကိုတောင် ကြည့်ဖြစ်သေး။ စာအုပ်ကိုင်ပြီး ထမင်းစားတဲ့ ငယ်ဘဝလေးကိုတောင် ပြန်လွမ်းသွားသေး။
ဗမာအိမ်သာ(ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်) နဲ့.. စာအကြာကြီးဖတ်ဖို့တော့.. သိပ်မဟန်ဘူးထင်တာပဲ..။
စာဖတ်ချင်.. အိမ်သာကြွေအိုးပုံစံက စ,ပြောင်းရမယ်..။
အရှေ့တိုင်းက အိမ်သာမှာ ရေသုံးသမို့.. စာအုပ်။ စာရွက်။ ဖုံးတွေအတွက်လည်း သိပ်မအိုကေလောက်ဖူးပဲ..။
အဟိ.. လူဆိုတာ ဘဝင်မြင့်မျိုးဗျ.. ဗမာအိမ်သာ မထိုင်နိုင်တော့ပုစ်..
ဟုတ်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်း အဲ့လို ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ရတဲ့အိမ်သာမှာ မထိုင်နိုင်တော့ဘူး။
ခဏလေးနဲ့ ခြေထောက် ကျင်လာ ညောင်းလာရော။
ဘိုထိုင် ထိုင်ရတာ များလာလို့လည်း ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုဟ် အပေါ်ပိုင်း(အထူးသဖြင့် ဗိုက်) ဝိတ်တက်လာတာကို ခြေထောက်က မနိုင်ဝန် ဖြစ်လာတာလည်း ပါမယ်ထင်တယ်။
အမှန်က.. ဗမာထိုင်ကမှ.. သန့်ရှင်းရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပိုညီညွတ်တယ်..။
ဂျပန်မှာ.. အိမ်တွေက အိမ်သာတွေ.. အဲဆိုဆောင့်ကြောင့်ထိုင်တွေပိုများမယ်ထင်တယ်..။
ဗမာထိုင် က ပိုပြီး ပုံ မှန်တယ် ဆိုလား း)
အထွက် ပိုဖြောင့်သတဲ့ း)